नयाँ कामको प्रस्ताव आउनेछ भने पहिलेका कमी कमजोरीलाई पनि सुधार गर्ने मौका छ । मनग्य धन आर्जन हुने समय छ । कामको चाप र थकाइबाट मुक्त रही विश्राम पाइनेछ । परिवारजनको साथले उत्साह जगाउनेछ । कामका सहयोगीहरू पछि हट्नेछन् भने प्रतिस्पर्धीहरूले सताउन सक्छ111न् ।
२०७८ श्रावण ३, आईतवार प्रकाशित
५.	फेरि अर्को खतरनाक नयाँ ‘भेरिएन्ट’ भेटियो , खोप लगाएका मानिसलाई पनि पुनः संक्रमण हुन सक्ने
६.	घर आँगनको फूलबाट आम्दानी गर्दै गृहिणी
७.	बाल रोग विशेषज्ञहरूले के भन्छ स्कूलहरू COVID-19 अन्तर्गत सुरक्षित रूपमा खोल्नको लागि आवश्यक छ
८.	माघ १० गते शनिबार, यस्तो छ तपाईको राशिफल
९.	किन COVID-19 खोप रोलआउट यति सुस्त छ